Min. Harena an-kibon’ny tany : tohanana ny asa fanarenana any Sava | NewsMada
Min. Harena an-kibon’ny tany : tohanana ny asa fanarenana any Sava
Mandalo fahasahiranana lalina ny faritra Sava taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo farany teo. Mijery izay fomba rehetra hanarenana ny faritra ny fikambanana Ased (Association sambavienne de l’entraide et de développement), firaha-miasa amin’ny fanjakana, ny orinasa tsy miankina, ny fikambanana hafa na olon-tsotra. Nanao téléthon teo amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny Ased, ny herinandro lasa teo, niantso tolo-tanana hoentina hanampiana ny any an-toerana.
Nitondra ny anjara birikiny tamin’izany, ny faran’ny herinandro teo, ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika miaraka amin’ireo sampana eo ambany fiadiadiany, ny BCMM, ny Omnis, ny IGM, ny Anor, ny Kraoma. « Coach » any amin’ny faritra Sava rahateo ny minisitra Zafilahy Ying Vah, nitarika ny minisitera nanolotra vola ho an’ny Ased. Efa misy tonga any an-toerana ny famatsiana fitaovana sy kojakoja samihaha ary manomboka izao ny asa fanarenana.
Anisan’ny mandray sy manara-maso ny asa, toy ny fanarenana ny fotodrafitrasa, ankoatra izay ataon’ny fanjakana foibe, ny fikambanana Ased. “Ahitana endrika izany fiaraha-miasa izany manomboka any amin’ny fokontany hatrany amin’ny faritra”, hoy ny ny filohan’ny fikambanana, Rambeloson Tony, sy ny depiote Behavana Vonjy. Manana ny toerany sy ny lanjany ny faritra Sava eo amin’ny toekarem-pirenena, hozahana avokoa ny fambolena potika, lalana tapaka sy ireo fotodrafitrasa simba.
“Betsaka ny tarehimarika tsy mitombina…”
Nohararaotin’ny minisitra Zafilahy Ying Vah io fotoana io nitondrana fanazavana momba ilay vaovao naparitaka “volamena 3 t mitentina 100 miliara Fmg…”, ny 18 marsa teo. Ny 19 marsa, nitondran’ny namoaka azy fanitsiana io tarehimarika io ka nilazany fa “180 kg fa tsy 3 t”. “Betsaka ny vaovao tsy marina, tarehimarika tsy mitombina manimba ny saim-bahoaka. Koa na nisy aza ny fanitsiana efa miparitaka hatrany ivelany ireny voasoratra ireny, noho izany, aoka mba vaovao azo antoka no avoaka. Misokatra ny minisitera ho an’ny fampahalalam-baovao ary heveriko fa rariny sy hitsiny izany ”, hoy ny minisitra.